Akhriso: Waa maxay sababta ay weeraradu u sii badanayaan, siddeese ayey Beesha Caalamku uga fal celin kartaa? | Kismaayo24 News Agency
Monday May 15, 2017 - 7:42 under Somali News by Tifaftiraha K24
Maraakiibta shisheeyaha ayaa ahaa kuwa la bartilmaansado maadaama oo ay budhcad badeedu ka heli jirtey madaxfurasho badan. Afduubkani waxa kale oo lagu soo waramey in uu ahaa mid khatar ah. Waxay u muuqataa in wali qaabkan ay ku xoogsadaan. Dowladaha Wadamada Galbeedka Afrika waxa liita qalabka ilaaleynta badaha, tan ayaanay ka faa’deystaan budhcad badeedu.
Dhaqaalaha lagu bixiyey iyo guusha laga gaadhey ayaa loo maleeyey in ay dhamaatey dhibaatadii budhcad badeedku.
“Budhcad badeeda waxaanu ka qaadney fursada ay bada ku aadi lahaayeen….laakiin waanu ognahay awooda loo baahan yahay in ay yartahay, ” ayuu yiri.
“Tan labaad, waanu ognahay in ay wali jirto doonitaankii. Shabakadihii budhcad badeeda wali wey jiraan, waxyaabo kale ayey qabanayaan, haddii aanu fursada siinana wey soo noqon doonaan.”
“Waxa aanu raadineynaa maraakiib gaar ah oo baabiisey qalabkayaga kaluumeysiga, markii aanu isu soo jirney ilaa 8mayl, markii hore waxa uu u muuqdey doon kaluumeysi, markii danbe ee aanu gudaha u galney, waxaanu ogaaney in uu ahaa Markab sidda shiidaal. Waanu iska haynay, waayo wax naga lumaya ayaanba jirin.”
Sidda ay sheegeen: “Sida adag ee wadamada kale isaga ilaaliyaan kaluumeysiga sharci darrada ah ayaa ku khasbay budhcad badeedka in ay raadsadaan meelaha ay yar tahay fursada lagu qaban karo iyo haddii la qabto ciqaabta oo yar, sidda (Galbeedka Badweynta Hindiya). ”